Global Voices teny Malagasy » Frantsa : Firehana Ara-Tsakafo Farany Ny Holatra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Marsa 2014 2:32 GMT 1	 · Mpanoratra Marie Bohner Nandika (en) i Alison, Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Eoropa Andrefana, Frantsa, Fahasalamàna, Hevitra, Mediam-bahoaka, Sakafo, Tontolo_iainana, Zavakanto & Kolontsaina
Holatra fihinana ve ? Iza no mahalala. Pavlinajane ao amin'ny Flickr CC-BY-2.0
[Mankany amin'ny tranonkala amin'ny teny Frantsay ny rohy rehetra raha tsy misy toromarika.]
“Manainga, manohy, manohana, ireo izay maniry handray anjara amin'ny fanovàna fiarahamonina hifanaraka amin'ny tonolo iainana sy ny maha-olona”, izany no teny fanevan'ny hetsika Colibris , natomboka tamin'ny 2008, izay, miaraka amin'ireo fankafizana 56 746 azon'ny pejiny Facebook, dia iray amin'ireo mpisava làlana ny hetsika fiverenana amin'ny tany, manetsika ny fanahin'ny Frantsa ngolin'ny olana ara-toekarena  izay nanomboka tamin'io taona io ihany. Manaraka io hetsika io ny hainahandro frantsay eo an”-toerana”, tsindrin'natany ny krizy ary fomba vaovao eny an-tsaha, voafaritra mazava tsara ao amin'ilay tantara an-tsary mitondra io anarana io ihany , ary mandeha ho azy raha toa ny ny holatra, endrika famantarana milaza tsara ny eny ifotony sy ny natiora, mitàna toerana lehibe ao anatin'izany.
Nanomboka nahazo vahana any Frantsa ny firehana maneran-tany amin'ny fihinanana ireo vokatra ao an-toerana noho ny savorovoro ara-toe-karena  sy ny fitadiavana sakafo ara-pahasalamana, anisan'izany ny holatra.
Nahazo valiny 708.000 ny bilaogim-pikarohana Google na “Google blog searched” tamin'ny teny hoe ” holatra”, porofon'ny fahalinan'ny tontolon'ny bilaogy amin'ny holatra. Cristau de Hauguerne , filoha vao haingan'io hetsika io dia mampitombo hatrany ny fitiavany holatra :
Raha vao mitsonika ny ranomandry, mijanona ny orana ary afaka manafàna ny tehezan-tendrombohitra ihany ny masoandro ny farany, mampitolagaga ny maro ireo holatry ‘cèpes’ rehefa lohataona mitranga any anaty alanà ‘hêtre’ sy ‘sapin’. Misy ireo vitsivitsy efa mitranga ny faran'ny volana Jona, lavitra azy ny hilofika, tsy misy oram-be manalokaloka, fa mitombo tsikelikely eo tsy mitsaha-mitombo miandalana ny holatra mandritra ny volana Jolay, ny karazany aestivalis mitondra ny ‘pinophilus’ miaraka aminy ao anatin'ny hamehany hiparitaka. Roa taona taorian'ny nizaràny ny toerana misy azy, ao anatin'ny herin'ny lohataona no mindrana ny vatan'ny hazo ‘hêtre’ ireo holatra marobe mba hivelarany amin'ny fararano.
Na dia efa nisy efa ela aza ny mpankafy holatra, dia nahazo anjara toerana eo anivon'ny vahoaka indray izy izao : toy ny divay na ny voankazo sy ny legioma, manana ny anjara toerany lehibe ao an-tsaina sy amin'ny sakafo izy izao, miaraka amin'ny fomba fiaina tsara sy manakaiky kokoa ireo tantsaha ao an-toerana.
Ny gazety boky We Demain  ao amin'ny lahatsoratra navoakany farany tamin'ny 13 Febroary teo aza dia nilaza fa “fanafody vaovao ho an'ny fiainana ny holatra “.
Ny avy eto an-toerana ampitahaina amin'ny avy any ivelany
Shiitake (Lentinula edodes) sary avy amin'i Kozumel ao amin'ny Flickr CC BY-ND 2.0
Indraindray anefa dia mifanohitra ny zavatra lazainy. Etsy ankilany, indraindrainy ny vokatra avy ao an-toerana, nefa etsy andaniny aderadera ireo fampanantenana mampitsiriritran'ny holatra nafarana. Tato ho ato izao dia holatra Aziatika toy ny shiitake  na ny enoki  no mandravaka ny talantalan'ny holatra eo akaikin'ireo karazana holatra mahazatra na an-jaridaina, holatra kely tahàka ny bokotra  ireo eny amin'ny tsena lehibe.
Ananan'ny Shitake avokoa ireo toetra rehetra hita amin'ny holatra : toetra manokana iadiana amin'ny fahanterana, iadiana amin'ny homamiadana, loharanonà otrikaina B telo samy hafa, ets. Hazavain'ny bilaogy Réseau Biloba  ireo toetra marobe ananan'io holatra io :
Manankarena karazana faika (fibres) fihinana ny Shiitake : zavatra izay tsy levon'ny taova. Tsy azo levonina ny ankamaroan'ny faika ao amin'ny shiitake fa manamora ny fiasan'ny tsinay. Ambonin'izany manampy amin'ny fiarovana ny aretin'ny fo sy ny lalaln-drà ary ny homamiadan'ny tsinaibe ny sakafo betsaka faika, torak'izany ihany koa fifehezana ny diabeta karazany faha-2 sy ny fahazotoan-komana.
Araka izany lamaody ve ny fihinanana holatra sa fisolokiana na zavatra vao hita malaza ? Namoaka lahatsoratra mahaliana ny bilaogy Absolutely Green  :
Noheverina fa tany Shina no nahitana io holatra io voalohany indrindra efa ho 6.000 taona mahery izay, fa ny Japoney no tompon'andraikitra nanaparitaka azy nanerana an'i Azia nanomboka tamin'ny taonjato faha 11. Ankoatra ny maha-sakafo tsotra azy dia heverina ho karazana bozaka mahagaga ny Shitake, maha-ela velona, manatsara ny fahatanjahan'ny fitaovam-pananahana sy mahatsara ny herim-batana. Hatramin'izao andro izao dia mbola tavela ary mampiady hevitra ny lazany.
Raha ampitahaina dia tratra aoriana ny fampidiran-dry zareo Tandrefana ity fambolena iray ity : niandry ny taona 1970 izy, nefa Etazonia efa nanao fahirano ireo holatra velona avy any Azia mba hirotsahan'ireo mpamboly amin'izy ity. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia mbola misalasala ihany ny Erôpeana, fa misy ihany koa anefa ireo azo isaina amin'ny ratsan-tanana mamboly izany any Holandy sy Frantsa.
Fantaro fa tsy mora vidy akory ny shitake, araka ny fanaporofoana tao amin'ny fandalinana sy fampitahana amin'ny antsipirihany nataon'i Virginie tao amin'io bilaogy io ihany. Nefa ho an'ireo izay manam-bintana hanandrana azy dia tena matsiro ny shitake, indrindra rehefa endasina amin'ny menaka oliva ary asiana sira sy dipoavatra kely.
Ny fomba fiotazana sy fikarakarana holatra
Boletus edulis – Cèpe de Bordeaux. Sary avy amin'ny caitphil ao amin'ny Flickr – CC BY-NC-ND 2.0
Betsaka ireo holatra azo alaina manakaiky ny tranontsika. Ny fiotazana ny holatra chanterelles , morels  ary Bordeaux porcini dia isan'ny hetsika fiverenana amin'ny tontolo, fiverenana amin'ny fototra toy ny fitadiavana ireo zava-tsoa entin'ny shitake.
Efa nampitandremana tsara ireo mpioty holatra tsindraindray mba hianatra tsara ny resaka momba izany hialana amin'ny zava-doza mety hiseho. Tranganà fanapoizinana avy amin'ny holatra 546 no voarakitra tamin'ny 2013 araka ny tatitra nataon'ny Ministeran'ny Fahasalamana. Tsy maintsy malina amin'ny toerana hiotazany izay matetika voaaramaso  ihany koa ny mpaka holatra.
Ankoatra izay, dia fantatra ihany koa amin'ny fahafahany mahavariana manangona ireo loton'ny tontolo iainana ny holatra araka ny fanazavana ato amin'ity lahatsary miteny Frantsay ity :
Manjary sakafo fototra ho an'ny vahiny ny “holatra dia” notazana, ary azo karakaraina amin'ny fomba maro manomboka amin'ny fomba tsotra indrindra mankany amin'ny sarotra indrindra. Zarain'i Anne ao amin'ny bilaoginy Papilles et pupilles  ny tena zavatra entin'ny Bordeaux porcini:
Tsy misy holatra azo ampitahaina amin'ity iray ity, ity no mpanjakan'ny holatra eto an-toerana. Ny anjara toeran'ny holatra dia ao amin'ny tsiambaratelo voaafina indrindra izay tsy zaraina raha tsy eo am-pandrianan'ny fahafatesany.
MAnolotra fomba betsaka fikarakarana sakafo amin'ny “holatra dia” ireo sefo lehibe. Manomboka amin'ny kirema vita amin'ny morel sy ny holatra fotsy ka hatramin'ny mofo vita amin'ny tongo-kisoa miaraka aminà tongolo kely sy holatra mainty ‘truffle’, misy ny zavatra ho an'ny tsiro rehetra, ho an'ny tsy mihinana afa-tsy zava-maniry sy ny mihinana ny zava-drehetra.
Inty misy fikarakarana sakafo tsotra vita amin'ny holatra ‘cèpes’ manta avy aminà sefo malaza:
Toy izao manaraka izao no fanazavana omen'ilay sefo :
Zarao amin'ny halavany ny porcini ary teteho manify.
Ataovy ao anaty tsatokaty ilay porcini voatetika dia raraho menaka oliva.
Ampio sira, dipoavatra, menaka oliva, ranom-boasary makirana, ary ranonà ‘truffle’ raha manana ianao. AZA mampiasa menaka ‘truffle’.
Asio ravinà bazilika dia afangaroy. Tokony hamiratra ilay fangaro.
Asio sira, dipoavatra ary menaka oliva.
Fanontaniana mandoro iray ihany no mitoetra ho an'i Cristau de Hueauguerne,  na dia efa ao anaty ririnina aza :
Koa satria isika anaty ririnina tsy nisy toa azy, dia any ambanin'ny tany no hiforonan'ny fotoan'ny holatra manaraka, na dia toa mampatahotra sy mampanahy aza izany dia maro amintsika no manontany hoe inona no entin'ny millesime  (taom-pamokarana) 2014 ao amin'ny sompitra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/03/20/58345/
 olana ara-toekarena: http://www.journaldunet.com/economie/crise-financiere/
 tantara an-tsary mitondra io anarana io ihany: http://www.dargaud.com/retour-a-la-terre#
 holatra kely tahàka ny bokotra: http://fr.wikipedia.org/wiki/Agaricus_bisporus
 Bordeaux porcini : http://leschampignons.fr/champignons/pr%E9sentation/fiches/c%E8pe%20de%20bordeaux.htm
 araka ny tatitra nataon'ny Ministeran'ny Fahasalamana. : http://www.sante.gouv.fr/546-cas-d-intoxication-dont-1-cas-grave-chez-un-enfant-lies-a-la-consommation-de-champignons.html
 mofo vita amin'ny tongo-kisoa miaraka aminà tongolo kely sy holatra mainty ‘truffle’, : http://www.atelierdeschefs.fr/fr/recette/5627-galette-de-pied-de-cochon-a-l-echalote-truffe-noire-puree-de-celeri.php